Ithegi: ukukhusela | Martech Zone
NgeCawa, ngoJulayi 13, 2014 NgoMvulo, Matshi 16, 2015 Douglas Karr
Ndiyichane ngqo. Yile nto bendiyicinga kwakamsinya nje ndakuba ndibona lo mfanekiso ungezantsi kwingxelo yeMediaPlant exhaswa nguMicrosoft, iiDola, iiBits, kunye neeAtom: Imephu yendlela eya kwikamva lokuthengisa. Kujongwe kakuhle kwaye kujongwa ngendlela itekhnoloji etshintsha ngayo ukwenza izicwangciso zokuthengisa ezifanelekileyo. Umzobo omnye ubonakele njengoko besincedisa iinkampani ukuba zenze izicwangciso zazo zentengiso kwi-Intanethi ke ndiyibhale apha ngezantsi. Ukuthengisa kukwimeko yotshintsho,
I-Brook yemihla ngemihla: Fumana ezona Tweets ziNomdla kakhulu
NgoLwesithathu, Matshi 19, 2014 Douglas Karr
Ngelixa ndilandela iiakhawunti ezininzi kwi-Twitter, andizilandeli ngokwenyani iiakhawunti. I-Twitter ngumjelo ekufuneka ndiwujongile imini yonke ukuba ndifuna ukuthatha lonke ulwazi endilifunayo kuwo. Ngelixa ndiyithandayo iTwitter kwaye sisixhobo esingakholelekiyo, ukufumana izixhobo ezikuvumela ukuba uwugqibe umxholo kuluncedo ngokwenene. I-Brook ikuvumela ukuba wenze iindidi kwaye ulandele iiakhawunti ze-Twitter ngaphakathi kwezo ndidi.
Uhlaziyo lweMeltwater Buzz: Ikhefu, Ixabiso kunye neGunya
NgoMgqibelo, Septemba 21, 2013 NgoMgqibelo, Septemba 21, 2013 Douglas Karr
Abantu bahlala bendibuza ukuba emhlabeni sikwazi njani ukubhala nokubhala malunga neetekhnoloji ezininzi zentengiso phaya. Kuyinyani ukuba simiswa kancinci ziingcali kwezonxibelelwano, kodwa Martech Zone ayisiyondawo yeendaba-siyindawo yokunceda abathengisi ukuba bafumane itekhnoloji abanokuthi bayisebenzise. Uninzi lwezixhobo esabelana ngazo sele zikhona okwexeshana- kodwa zabelana ngendlela okanye inqaku elinjalo
I-Curata: Umxholo ofanelekileyo weShishini lakho.
NgoMgqibelo, Agasti 10, 2013 NgoLwesibini, Aprili 5, 2016 Douglas Karr
ICurata sisiqulatho sesoftware yokukhawulezisa, ekunceda ukuba ufumane ngokulula, ucwangcise kwaye wabelane ngomxholo ofanelekileyo kwishishini lakho. Umxholo wokugcina ubugcisa kunye nesayensi yokufumana kunye nokwabelana ngomxholo osemgangathweni kwisihloko esithile. Ukukhawulezisa kunceda wakhe abaphulaphuli. Emva koko uneqela elikhulu labantu onokwabelana nabo ngesiqulatho sakho, kwaye ngubani onokusasaza igama. nge-Neicole Crepeau kwi-Convince kunye ne-Convert Fumana-i-Curata iyaqhubeka ukukhangela iifayile ze
Ukondla isiLwanyana seRandi ngeRallyverse
NgoLwesihlanu, Februwari 8, 2013 Lwesine, ngoFebruwari 7, 2013 Douglas Karr
Iinkampani ezinezicwangciso ezikhulu zomxholo azithinteli ixabiso lenkqubo yazo kumxholo ababhala bodwa. Kukho ubuninzi bomxholo obetha iwebhu rhoqo kwisibini esinye… ezinye zilungile, ezinye zimbi. Isakhono sokucofa kuloo mlilo, ukhuphe iigugu, kwaye wabelane nabaphulaphuli bakho lilungelo elikhulu ngaphezu kwabakhuphisana nabo. Ukuba uba ngowona mthombo wolwazi kumathuba akho kunye nabathengi, akufuneki bajonge